Iindlela ze-5 I-Expo2020 iya kukhulisa i-Economy yase Dubai Qoqosho
Iindlela ze-5 I-Expo2020 iya kukhulisa i-Economy yase-Dubai
Ubambiswano lweBlogging e-Dubai
Challenge Dubai Fitness
E papashwe ngu Inkampani yeSixeko sase Dubai at Ngamana 28, 2019
Iindlela ze5 i-Expo2020 iya kukhulisa uqoqosho lwe dubai
Ukususela ngo-Okthobha i-20, i-2020, kude kube ngu-Epreli 10, 2021, the UAE sizokwamkela umhlaba kubhiyozo lwenkcubeko, ukusebenzisana kunye nezinto ezintsha kwi-2020 World Expo Fair.
Ngokuqala i-World Expo iya kubanjelwa kwingingqi yeArabhu, kwaye indawo yayo yi-Expo 2020 indawo e-Dubai. Kuze kube ngumhla, inani elipheleleyo lamazwe e-190 liqinisekisile ukuthatha inxaxheba kwimbonakalo emiselweyo yokuzisa izigidi zabantu kwi-UAE. Umxholo okhethiweyo kwi-Expo 2020 "Ukuxhuma iingqondo, Ukudala Ixesha elizayo", kunye neengqungquthela eziKhuselekileyo, Ukuhamba kunye Ithuba.
Uhambo lwe-Expo 2020 lwaba sesikhundleni kwi-27th NgoNovemba 2013, xa i-Dubai iphumelele ngamalungelo okusingatha phakathi kwezinto ezonwabileyo, imihlali kunye nemisebenzi yomlilo. Iholide kaZwelonke yavakaliswa kuwo onke amaziko emfundo kulo lonke ilizwe ngelilandelayo. Oku kukubonisa ukuba kubaluleke kangakanani isimemezelo kwaye emva koko isiganeko asithethi kuphela kwi-Dubai kodwa yonke indawo ye-UAE ne-Middle East. Iinjongo zokushiya ilifa elinentsingiselo nelingapheliyo eliza kugcina kwizizukulwana ngexesha le-Expo lilawulwa ngokusemthethweni.
Ezi ntlanga zilandelayo zivakalise ukuthatha inxaxheba kwi-Expo 2020:
Iiprojekthi zokuthengisa kunye noNxibelelwano ziyaqhubeka kwaye ziqhutywe ngempumelelo kwiziqonga eziliqela. Kukho izibonelelo ezininzi ze-Expo ngama-superstars kunye Iinkampani zomhlaba kunye namaziko sele sele ebonakalise iipatvili zabo ezikhangeleleneyo nezizayo.
Ngaphandle kwazo zonke iindumiso kunye nekhasi le-peanry njani i-Expo 2020 iya kuthintela njani uqoqosho, kwaye iya kuzisa ntoni kwi-Dubai yonke?
Iindlela ze-5 I-Expo2020 iya kukhulisa i-Economy yase Dubai. Jonga i-Expo 2020 Isiteshi se-YouTube
Ubuchule belizwe bokudala imisebenzi bubonisa ukuba amacandelo oqoqosho lwawo asebenzayo kwaye asebenza. Emva kokuba amathuba omsebenzi adalwe, kukho ukunyaniseka kwabathengi kubakho ukunyuka kweendleko. Amashishini akhula kwaye akhulume ngokubanzi, abantu banokuzonwabisa ngendlela yokuphila ephuculweyo kwizoqoqosho oluzinzileyo. Emva kokuba iDiby Dubai ivakaliswe ngokusemthethweni njengemikhosi ye-World Expo 2020, kwaqikelelwa ukuba ngaphezu kwe-277, imisebenzi ye-149 yayiza kwenziwa phakathi kwe-2013 kude kube sekupheleni kwe-Expo kwi-2021 esekelwe kwisifundo.
Le mi sebenzi iyadalwa kuwo onke amacandelo oqoqosho, kuquka ukuKhenketho, ukuThengisa, ezezimali, Ezithengiswayo, izakhiwo, uhambo ngomoya, ububele, ITeknoloji, iMedia kunye noNxibelelwano, iThutho, ukhuseleko, Urhwebo kunye Investment kunye nezinye ezininzi. Kwi 'umsebenziicandelo le-Official Expo2020 Dubai iwebhusayithi, kukho iindlela zokungenisa ii-CV kunye nokufaka amathuba athile akhoyo. Amathuba emisebenzi aya kubakho kwi-pre-expo, ngexesha le-Expo kunye ne-post-expo.
Bona yonke imisebenzi yokuvula kunye ne-Expo 2020
Kakade, amawaka sele aqeshwe ngokukodwa ekwakhiweni, kwezobuchwephesha nakwiinkalo zokuthutha njengoko imisebenzi iseyoqhubeka kwiziko le-Expo2020 nakwezinye iindawo ezifanelekileyo ekulungiseleleni i-Oktobha 2020. Imisebenzi eminye yangaphandle yaveliswa ngokuthatha inxaxheba kumazwe ahlukeneyo. Abacebisi baJobe bangasebenzisa amathuba kula mava ukuba babe yinxalenye yamava okwenza imbali.
Ukuxhobisa kwiCandelo lezoKhenketho
UkuKhenketho kuyimfuneko ebalulekileyo ekukhuleni koqoqosho koqoqosho lwe-UAE. Ngoku ka Dubai KwiSebe Tourism Kunye noThengiso lwezoRhweba, i-Dubai ibhale ukunyuka kweepesenti ezimbini kwiindwendwe ezikhatywayo kwangexesha elifanayo kunyaka odlulileyo. Njengasekupheleni kwekota yokuqala ye-2019, i-Dubai yayamkele iindwendwe ze-4.75 zezizwe ngezizwe ngezizwe.
Iimpawu zaseDubai ziphambili kwimephu yoKhenketho yeHlabathi enezinto ezinomdla njenge Burj Khalifa, Ihotele yePalm neBurj Al Arab. Sele i-UAE ineenkcubeko ezine ze-UNESCO zeLifa leMveli kwiHlabathi, kunye nezinye iindawo ezisibhozo zeNkcubeko zeLifa leMveli.
Ukusingathwa kwe Dubai kwiHlabathi Expo 2020 kukuqhubela phambili ekuphuculeni ukunyuka kwezokhenketho kwilizwe ngaphambili, ngexesha nangemva kwe-Expo. Kulinganiselwa ukuba abantu abayizigidi ze-25 balindele ukutyelela i-Expo 2020 e-Dubai phakathi kwe-20th Oktobha 2020 kunye ne10th Epreli 2021.
I-Dubai Corporation yezoKhenketho kunye noRhwebi lokuRhweba (iDCTCM) ihlala isebenza ngokubambisana nearhente karhulumente yokuthutha ukwenza kube lula kubakhenkethi beza e Dubai ukuze bafumane ii-visa kalula. I-Dubayi iyona ndawo yokubambisa i-aircraft kwindawo kunye nebala elilula lokudibanisa kubahambi ekuhambeni kwendlela eya kuyo yonke indawo.
Ngelizwe le-Expo 2020, i-Dubai ibhetele ngakumbi njengendawo yokutyelela, kwaye oku kuya kubangela ukukhawuleza kwi-GDP ukwenzela ukukhula koqoqosho kwezoqoqosho.
Ukwandisa amathuba okuTyala
Ukuzithemba kwabathengi kukhuliswa xa uqoqosho lukhula kwaye luzinzileyo. Ngokweenkcukacha ezizimeleyo ezivela kwiinkampani zengcali zengcali ze-EY, u-Expo 2020 utyalo-mali olude lwexesha elide kwilizwe liya kukhulisa uqoqosho lwayo nge-AED 122.6 billion (i-USD 33.4 billion) kunye nenkxaso ye-905,200-iminyaka phakathi kwe-2013 ne-2031.
I-Dubai isetyenziswe ukubona ukunyuka kotyalo-mali behlabathi ngenxa yamalungelo ayo okusingatha i-Expo2020. Utyalo-mali luyabonakala kwilizwe xa libizwa ngokuba likhuselekile, liyakwamkela, linenzuzo. I-UAE yiyo yonke into kwaye ilula kwaye ilula kwiGulf naseMpuma Mpuma. Utyalo-mali luvulelekile kwiindawo zoRhwebi, iiRhwebo, iiMpahla kunye nokuThuthukiswa, ezeMali, uLonwabo, uKhenketho, Ukwakhiwa, ukuKwamkela, ukuKhenketha kunye nezinye ezininzi.
Kakade amashishini athile athe afudula okanye avula amagatsha kunye nezakhiwo e Dubai. Ulwakhiwo luqhubeka ngokubanzi lweeprojekthi. Imibutho yamazwe ngamazwe kunye namazwe ngamazwe adibanisa i-Expo kunye namaqabane alo aseburhulumenteni abonisa ukuziqhenya ngokubambisana kwabo kwimpahla yabo yokuThengisa nokuBetha. Bobabini abatyali-zimali basekhaya nakwamanye amazwe banokuqiniseka ukuba nge-World Expo 2020 ebanjelwe e-Dubai, uqoqosho lwe-UAE luzinzile, kwaye utyalo-mali lwabo lukhuselekile kwaye lubuyiselwe.
Ukwandisa nokunyusa kwishishini lendawo
IDubai ilikhaya kumashishini aliqela, nabanini bawo bengabemi base-UAE, abathengisi kunye nabatyali bamanye amazwe. Zininzi iikhonsepthi zasekhaya ezikhuliswe ekhaya ezinokuxhamla ngokusingathwa kweDubai ye-Expo 2020. Amashishini endawo angumgogodla ekukhuleni kwabo bonke uqoqosho, kwaye oorhulumente abaninzi batyala imali kukhuliso kunye neenkqubo zokuqalisa imbewu ukukhuthaza urhwebo nokukhula kweenkampani zasekhaya. Indawo yasekhaya ishishiniZombini, i-multicalals ezinkulu kunye nee-SME kulindeleke ukuba zibone amandla amakhulu ekusetyenzisweni nasekutyalomali kumacandelo ngamacandelo oRhwebo lweNdawo, iMithombo yeendaba, ukuHamba noKhenketho, uLonwabo, ukuRhweba kunye namashishini oqoqosho ngokubanzi.
Kukho amathuba amashishini amaninzi aphakanyisiwe kuwo onke amacandelo atholakalayo nakwiimarike ezintsha kunye ezikhulayo. Amanyathelo amaninzi kwiinkontrakthi zengingqi anokuphandwa ngeenkqubo zentengiso kunye neentengiso ezifumanekayo kumathuba okuthenga. I-Expo2020 inendawo yokuthengisa kwi-intanethi yehlabathi esemthethweni apho iimeko zoshishino zinokufunyanwa ngokubhalisa kwaye kunenzuzo ngakumbi kwi-SME. Le yindlela efanelekileyo yoshishino lendawo ekujoliswe kuyo ukudala imida emitsha ingabonisa ihlabathi into enokuyenza.
I-Expo Dubai Expo 2020
I-Expo2020 ibone ukuphuhlisa okukhulu kwiziseko zase Dubai kunye ne-UAE ngokubanzi. Izithuthi ezikhokelela kwisayithi ye-Expo ezifana neendlela, imida yee-metro kunye neebhanti ziye zandiswa kwaye ziphuculwe. Kukho ezinye iiprojekthi eziqhubekayo ekwakhiweni kwamahotele, indawo yokuhlala, ukunakekelwa kwezempilo kunye namanye amaziko ezoshishino.
Ulwazi olukhoyo lubonisa ukuba uninzi lwendawo yendawo inokuphinda isetyenziswe, kwaye eli nyathelo lokuzinza liya kwaziwa njenge-2020 yeSithili emva kwe-Expo. Ukubonelelwa kweziseko zophuhliso kunye nezinto eziluncedo ze-Expo ziya kuqhagamshelwa kumxholo wazo woLondolozo, ukuHamba kunye neThuba. Indawo ikwindawo ekufutshane ne-Al Maktoum International isikhululo, Dubai World Central (DWC) eJebel Ali kwaye oku kuyakwenza lula ukuthuthwa kweendwendwe kunye nabatyali mali.
Izibonelelo ziya kusetyenziswa ngaphambili, ngexesha nangemva kwe-Expo; kunye nokunyusa kwamashishini kunye noqoqosho ngokubanzi.
Iindlela ze-5 I-Expo2020 iya kukhulisa i-Economy yase-Dubai,
Ulwazi lwetikiti sele luphuma kwiiyantlukwano ze-1day, iintsuku ze-3, inyanga nenyanga kunye nokudlula kwamaxesha. Kuya kubakho izaphulelo zolutsha kunye nezabafundi; kunye nokufikelela simahla kwabantu bokuzimisela, abantu abadala 65 nangaphezulu, kwaye kids ukuya kuthi ga kwi-5 iminyaka.
Ihlabathi le-Expo 2020 linike iDaibra i-right exposure kunye nedumela elifunekayo ekubambiseni ukuzithemba kwehlabathi jikelele kubachaphazelekayo basekhaya nakwamanye amazwe. Kuye kwaphakamisa umgama wokuzikhukhumeza kubemi be-UAE kunye nabemi ngokufanayo kwaye baya kushiya ilifa elide elihlala ixesha elide ekukhuleni kwenkcubeko kunye noqoqosho.
I sihloko sibhaliwe,
(UkuThengiswa koNxibelelwano, uMbhali, uMdali weMxholo)
Qhagamshelana noThesa R. Fianko kwi-Linkedin
Inkampani yeSixeko sase Dubai ngoku kubonelela ngokulungileyo guides Imisebenzi eDubai. Iqela lethu lagqiba ukongeza ulwazi kulwimi ngalunye kolwethu Imisebenzi e-Dubai Guides. Ke, unale nto engqondweni, ngoku unokufumana izikhokelo, iingcebiso kunye nomsebenzi kwi-United Arab Emirates ngolwimi lwakho.